Mbido AKWINGKWỌ UKWUKA FOOTBALL Ndị na-egwu bọọlụ Scottish John McGinn Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Ihe omuma anyi nke John McGinn na-agwa gi ihe omuma banyere akuko nwata ya, mbido ndu, ezinulo, ndi nne na nna, enyi nwanyi / nwunye ka o buru, ndu ndu, ndu onwe onye na isi okwu ya.
Na nkenke, ọ bụ ihe niile gbasara njem ndụ ya, site na mgbe ọ bụ nwata, ruo mgbe ọ ghọrọ onye a ma ama. Iji mee ka agụụ ịgụ akụkọ onwe gị sie ike, nke a bụ nnukwu ụlọ maka ebe ndị okenye - nchịkọta zuru oke nke John McGinn's Bio.
Ee, onye ọ bụla maara banyere mmekọrịta ya dị egwu na onye isi mmụọ nke Aston Villa Jack Grealish.
Ọzọkwa na eziokwu na ị na-ahụ ya dị ka ihe N'okpuru kpakpando na otu Dean Smith's Enterprising team. N'agbanyeghị nkwanye ugwu a, anyị kwubiri na ị gaghị ama akụkọ ndụ ya zuru ezu. Anyị nwere ya, na-enweghị n'ihu ado, ka na-amalite.
John McGinn Nwatakiri Akuko:
N'ihi na ndị na-ebido Biography, ọ na-ebu aha "Meatball". John McGinn mụrụ na 18th nke October 1994 nne ya, Mary McGinn na nna, Stephen McGinn na Glasgow, Scotland.
Onye bọọlụ ndị Scottish bụ ejima na nwanne nwanyị aha ya bụ Katie. Ọ bụ nwa nke atọ n'ime ụmụ anọ amụrụ site na njikọ dị n'etiti nne na nna ya nke yiri ka ha nọ na 60s.
Obi abụọ adịghị ya, o nwere ịmụmụ ọnụ ọchị ya site na mama ya na nna ya bụ ihe nzuzo n'azụ ume ya dị egwu.
Ndị nne na nna John McGinn - Stephen na Mary McGinn na-eso nwa ha nwoke eme ememe.
Akụkọ Na-eto Eto:
Mary na Stephen zụlitere John McGinn tinyere ụmụnne nwoke abụọ ndị okenye na ụmụnne nwanyị ejima na Clydebank.
N'oge ahụ, nwoke Villa na-abịanụ nwere obi ụtọ iso ụmụnne ya ndị okenye, Stephen na Paul na-egwu bọl. Ọ chọghị ịma ihe ọdịnihu ga-abụ, ma e wezụga, ikekwe, ihe ọ ga-eri.
N'ikwu okwu banyere afọ, ọ ga-abụ na John McGinn nwere otu nri na-enweghị ike ịhapụ.
Ọ hụrụ n'anya ibu ngaji ya ogologo ụbọchị niile - n'aha iji obere ohere iri nri. Obi dị m ụtọ na owu ọmụma nwata ya abụghị onye owu na-ama dịka ezinụlọ ya na-egbo mkpa ya.
John McGinn Ezigbo Ezinụlọ:
Dị ka Kieran Tierney, Na-etolite n'ezinụlọ nwere ntụsara ahụ nyere nwata ahụ ihe okomoko niile ọ chọrọ dịka nwatakịrị.
O doro anya na ezinụlọ John McGinn nwere ndekọ ndekọ na football. Dad nna nna ya (Jack McGinn) jere ozi dị ka Onye isi nke Scottish Football Association.
Ikekwe mmetụta nke nne na nna ya ochie nwere bụ ihe mbụ mere ka ụzọ ya dị mma na egwuregwu.
John McGinn Ezinụlọ:
You maara? Obodo nke John McGinn nke Clydebank dị na Glasgow, obodo kachasị nwee ọnụ ọgụgụ na Scotland na obodo nke ise a kacha leta na UK.
Ka m na-agwa Biography a, ndị njem nlegharị anya tụgharịrị gaa obodo ahụ n'ihi ọmarịcha ụlọ na ọdịbendị bara ụba.
N'akụkụ footballing nke ihe, akụkọ ifo dị ka Liverpool Andrew Robertson emewo ka ndị Glaswegians nwee obi ụtọ n'oge ọ bụla ha nwere uto ihe nketa egwuregwu ha.
John McGinn Eziokwu Akụkọ:
Site na mmalite, ndị mụrụ ya hazielarị ha ụzọ bọọlụ. N'ịgbaso nzọụkwụ nke nwanne ya nwoke nke okenye, Stephen, na Paul, obere John banyere ụlọ akwụkwọ Scottish nke St Mirren mgbe ọ dị obere.
Laa azụ n'oge a, a na-ahụ nwatakịrị nwoke na-eto eto na pitch n'ihi obere ogo ya na nkà ya. Little McGinn bụ nwatakịrị mara mma nke nwere ike ịbafe karịa ụmụaka.
Hụ ụzọ o si agabiga onye mmegide mere ka ndị mmadụ chee na Lad ga-etolite ma nwee ọganiihu.
Iji tinye ọhụụ n'ọrụ, ndị nne na nna John McGinn mere akụkụ ha n'ịhụ na nkwụsi ike gafere usoro oge agụmakwụkwọ.
N'oge ahụ, Ọ bụrụ na ọ nọghị na usoro oge bọọlụ St Mirren, a ga-ahụ McGinn ka ọ na-aga egwuregwu ụmụaka ọ bụla. Ọ gara egwuregwu ncheta ụbọchị ọmụmụ. You nwere ike ịchọta afọ iri dị ebe a?
Malite ndụ n'oge nwata ya tọrọ ntọala kachasị mma maka uto ya. Iji mee ka ọganihu dịkwuo elu, nne na nna ya kwadoro ka a kpọga ya n'otu nku nku nke ụlọ ọrụ aha ya bụ Ralston agụmakwụkwọ.
Danny Ings Child Story Plus Na-emeghe akụkọ ndụ
Nke a bụ nwatakịrị nwoke nwere obi ụtọ n'oge na-adịghị anya, bụ onye gosipụtara ihe ịrịba ama nke idozi. Still ka dị mkpụmkpụ n’ogologo, McGinn bidoro itolite ọtụtụ afọ ma emechaa.
Dị ka okike ga-enweta ya, o nwetara ihe ọ chọrọ - ịdị elu na arụmọrụ magburu onwe ya n'oge agụmakwụkwọ ya niile.
Nbanye n'ime ìgwè mbụ nke St Mirren (na oge tupu oge nke 2012-13) malitere na ọkwa dị mma.
Dị ka onye a tụkwasịrị obi, nwa okorobịa Scott nyeere ndị nọ n'okpuru 20 aka n'ọtụtụ mmeri, gụnyere mmeri mmeri egwuregwu bọọlụ.
John McGinn's Bio - Roadzọ Na-ewu ewu Akụkọ:
Na-ebili na ọkwa, igwe etiti ahụ bịanyere aka na nkwekọrịta 3-afọ na St Mirren na 2012.
O di nwute na, oge ya na klọb ahụ gwụrụ ka ọ merụrụ ahụ na nkwupụta nzuzo dara ada nke Steven Thompson - onye isi ụgbọ mmiri St Mirren.
Site n’obi dị arọ, nne na nna John McGinn tinyere aka. Stephen banyere na ọnọdụ ahụhụ ya wee mee St Mirren akwụkwọ ikpe. Anyị amaghị ma ọ bụrụ na ezinụlọ John McGinn meriri ikpe ahụ. Mana otu ihe doro anya, ọ hapụrụ ndị nsọ.
N'adaghị mbà na nrọ ya, onye Midfielder bịanyere aka na nkwekọrịta 4 afọ na ụlọ ọrụ Edinburgh Hibernian na 2015. N'ebe ahụ, ọ ghọrọ akụkụ nke ndị otu meriri 2015-16 Scottish Cup mgbe afọ 114 gasịrị.
Ihe omuma John McGinn - Akụkọ nke oma:
Banye na Hibs dị ka nhọrọ dị oke mma maka Scott, bụ onye guzobere ngwa ngwa dị ka ike dị egwu n'etiti etiti.
N'ezie, talent ya enweghị atụ dọtara ọtụtụ onyinye, ọbụnadị site na Brendan Rodgers'Celt. N'agbanyeghị mmasị, McGinn kwenyere na ya nwere ike nweta ihe ọzọ na Aston Villa, nke o mere na ihe akaebe a.
Na Villa, ọ ghọrọ onye ọchịagha etiti obodo, onye na-eme ka a mata ọtụtụ ihe Ollie Watkins'na mkpuchi kachasị mma maka Tyrone Mings.
Otu n’ime ihe kachasị gosipụta n’ọrụ ya bụ mgbe o tinyere ọnụ ọchị nke ndị mụrụ ya, ụmụnne ya na ndị obodo ya.
John so na ndị dike nyere aka Scotland tozuru oke maka Euro 2020 mgbe o merisịrị Serbia na ntaramahụhụ.
Ọ bụrụ na ị ka na-akpọ ya n'okpuru-akara, na-ekiri ihe ngosi vidiyo ma nweta mgbanwe nke uche. Ndị ọzọ, dị ka anyị na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
John McGinn Mmekọrịta Ndụ: Nwanyị / Nwunye:
Ee, ọ na-agbasi mbọ ike ịnọgide na-arụ ọrụ ọma na pitch. Meatball azụlitewokwa mmekọrịta na-aga nke ọma. McGinn ekwenyeghi na football-tupu-ihunanya dika ndi ozo Scott McTominay. Ka m na-ede Bio a, nwata nwoke hụrụ n'anya na-akpachi anya na enyi nwanyị ya na-eme ogologo oge - Sarah Stokes.
Nwanyị nwanyị ahụ nke ga-abụ nwunye John McGinn nwere ịhụnanya miri emi maka ihe nwoke ya rụzuru. Dị ka di na nwunye, nwa Clydebank na-eme ka o doo anya na ọ ga-efu oge ọ bụla ọ bụla ọ na-arụ ọrụ bọl. Ugbu a bụ ihe doro anya nke itinye ụdị ihe ahụ.
Ọnye na-bụ John McGinn? N'èzí mara ya dị ka otu n'ime ndị kpaliri ihe mgbaru ọsọ 7 megide Liverpool, na-eme ka ndị Reds merie mmeri ha kachasị njọ n’ime afọ 57.
Maka ndị na-ebido ebido, ọ bụ onye enwetara ngwakọta nke njirimara zodiac Libra. McGinn maara ihe, bụrụkwa ihe, platonic na onye na-eme udo. N’ezie, ọ bụ nanị oge ole na ole gị na ya nọrọ nwere ike ime ka ị xicụjuo anya n’àgwà ọma ya.
Anyị hụrụ na ọ na-adọrọ mmasị na McGinn hụrụ n'anya na-etinye oge na ọdọ mmiri na osimiri kemgbe ọ bụ nwata ruo ụbọchị. Nke a gosiri na o nweela anya maka okike. Ọbụghị naanị na ọ hụrụ udo na bọọlụ, mana ọ ka zụlitere omume nke inwe ekele maka ịma mma nke ihe okike.
John McGinn Web Ndụ:
Na-emefu ego na klọb gọọmenti dịka Ryan Fraser ekwesịghị ịbụ nsogbu maka onye ọkpụkpọ Scottish na-akpata ọtụtụ pound. Agbanyeghị, onye na-agafe agafe na-enweta ọ eụ a na-apụghị ịghọta aghọta na ileta ogige ntụrụndụ na ndị otu ezinụlọ.
Maka onye ọkpụkpọ na-enweta ihe ruru £ 1.3 nde kwa afọ, anyị achọghị onye dibịa mgbaasị ịgwa enweghị ike ịzụta ụgbọala ndị mara mma na ụlọ dị mma. Eziokwu bụ, ọnụọgụ John McGinn ruru ihe ruru £ 7.6 Million enyela ya ụzọ dị oke ọnụ ahịa ụzọ ụgbọ ala SUV - Audi Q3 n'etiti ọtụtụ akụ ndị ọzọ.
John McGinn Ndụ Ezinụlọ:
Ọ bụghị mgbe niile ka football bụ naanị isi iyi nke obi ụtọ ya. McGinn enweghị ike ịchị ọchị ma chịrị obi ya ọchị oge ọ bụla ya na ndị ezinụlọ ya nọ bụ isi ihe na-akpali ha. N'akụkụ a, anyị na-ewetara gị eziokwu banyere onye ọ bụla so n'ezinụlọ ya nke obi ụtọ.
Banyere nna John McGinn:
Ọ bụrụ na ọ dị otu onye na-eche na ọ gọziri ya na egwuregwu, ọ ga-abụ Stephen, nna ya. Anyị niile maara na ọ dịghị mfe ịkpọlite ​​ndị egwuregwu bọọlụ atọ gbakọtara ọnụ, mana Steve na-arụsi ọrụ ike mere ya.
Ka m na ede Bio a, nna McGinn mere emume ncheta omumu nke iri isii. N'ezie, ọ hisụ ya enweghị oke oke ka ụmụ ya na-aga n'ihu na-arụ ọrụ ha.
Banyere nne John McGinn:
A na - ekwukarị, n’azụ nwoke ọ bụla nwere ihe ịga nke ọma, e nwere nwanyị - naanị na oge a, nne McGinn enwetala otuto. Aha ya bụ Mary McGinn, ọ bụ nne nke Meatball, Katie, na ụmụnne ya ndị nwoke tọrọ Stephen Jr na Paul.
N'ezie, ụwa nke football nwere ọtụtụ otuto maka ịzụ ụmụ ya nwoke bọọlụ nke ọma. N'ihi Mary, Scotland ugbu a na-anụ ụtọ ọrụ achọghị ọdịmma onwe onye nanị nke John McGinn. O doro anya, ọ na-akwado nwa ya mgbe mgbe site n'akụkụ.
Banyere ụmụnne nwanne John McGinn:
Ọ bụ okpukpu abụọ, okpukpu abụọ nsogbu, na okpukpu abụọ ma ọ bụrụ na ejiri ụmụ ejima gọzie gị. N'ikwu eziokwu, McGinn enweela ọtụtụ njem siri ike na nwanne ya nwanyị ejima, Katie. Dị ka a tụrụ anya, ụmụnne abụọ ahụ na-adakarị ma na-echekwa onwe ha kemgbe ha bụ ụmụaka.
Dịka anyị kwuburu, McGinn nwekwara ụmụnne nwoke abụọ ndị tọrọ aha ya bụ Stephen na Paul. Mụnne ya ndị okenye bụkwa ndị egwuregwu bọọlụ ọkachamara na-egwuri egwu na St. Mirren tupu McGinn enwee ike ịbanye na klọb ahụ. N'ịtụle ụmụnne niile, o doro anya na John bụ onye na-azụ ezinụlọ McGinn.
Banyere ndị ikwu ya:
Ezinụlọ McGinn enweela ahụmịhe na-adị mfe na egwuregwu ọbụna tupu a mụọ ya. Ihe kpatara ya bụ na nna nna ya, Jack McGinn, na-eje ozi dị ka onye isi oche nke Celtic na onye isi oche nke Scottish Football Association.
E wezụga ndị ezinụlọ ya dị ndụ, McGinn nwere nwa nwanne, na nwanne nwanyị nwanyị na-ese n'okpuru. Obi dị ya ụtọ ịbụ nwanne nna - enweghị mgbagha banyere nke ahụ.
John McGinn Eziokwu Eziokwu:
Iji chịkọta akụkọ ndụ nke Long shot taker, lee ụfọdụ ihe ga - enyere gị aka ị nweta nghọta zuru oke banyere ihe ncheta ya.
Eziokwu nke 1: Notgbọala Na-atọ ọchị:
N'ụzọ dị mwute, ọtụtụ n'ime ndị na-akwadoghị ya nwere mmasị n'ịkwa emo isi John McGinn. Fọdụ ga na-eti mkpu “Nnukwu Isi!” ka ha na-agwa ọfụma egwuregwu bọọlụ Scottish. Dị ka a ga - asị na nke ahụ ezughi, ụfọdụ ndị a na - amaghị aha ha nwere ihe odide edebere na nọmba ụgbọ ala John McGinn na-ezube ịkwa ya emo.
Eziokwu nke 2: Nkwụ ụgwọ ụgwọ ụgwọ na ego kwa sekọnd:
Ndị otu anyị na Lifebogger ejiri nlezianya tụlee ego McGinn nwetara. Site na nyocha anyị mere, anyị chọpụtara na nwa afọ Scottish ga-arụ ọrụ otu afọ iji rite ihe McGinn na-enweta n'ime otu ọnwa.
Kwa Afọ £ 1,302,000
kwa ọnwa £ 108,500
Kwa Izu £ 25,000
Kwa .bọchị £ 3,571
Kwa elekere £ 149
Kwa Nkeji £ 2.5
Kwa nke abụọ £ 0.04
Anyị etinyela nyocha nke ọma na ụgwọ ọnwa Long Passer dị ka elekere na-akụ. Chọpụta n'onwe gị ego ole ọ kpatarala kemgbe ị bịara ebe a.
Ebe ọ bụ na ị malitere ilele John McGinn's Bio, nke a bụ ihe ọ kpatara.
Eziokwu nke 3: Ihe kpatara aha otutu:
Dịka anyị kwuburu, ọtụtụ ndị fans ya na-akwa ya emo n'ihi ọdịdị isi ya. N'otu aka ahụ, aha ya (Meatball) nwekwara njikọ na nhazi nke isi ya. Otu oge, nwatakịrị nwoke dị afọ 9 bịakwutere ya na-ajụ ihe kpatara ndị mmadụ ji nye ya Meatball. John zara sị…
“MGBE m dị afọ iri na asaa, MAMA m jiri ntutu m kwaa ntutu m. Azụ M, Onye ọ bụla mara na isi m gbara gburugburu na m dị ka anụ. ”
Eziokwu nke 4: John McGinn egbugbu:
Enwere ọtụtụ Fans ndị gaara enwe mmasị ịhụ onye ọkpụkpọ Scottish na-abanye n'ime ụwa inks. Otú ọ dị, McGinn enweghị mmasị na egbugbu. Fọdụ ndị hụrụ egbugbu n'anya degharịrị foto McGinn na inking ya. Hụ onwe gị ka ụlọ ike nke Villa ga-eji ahụ ya.
Eziokwu nke 5: Ogbenye FIFA Stat:
Nke mbụ, ọkwa ya niile na-egosi na a na-eleda ya anya. Iji mee ka ihe ka njọ, ikike ọ nwere ike ị nweta 80 (isi 6 dị n'okpuru nke onye ọkpụkpọ Scotland, Billy Gilmour),, bụ ihe ọ bụla dee n'ụlọ banyere. Iji kwuo eziokwu, Powerhouse nke Aston Villa kwesịrị ka ọ bụrụ ihe karịrị 80 maka ogo ya na gburugburu 86 maka akụkụ nwere ike.
Eziokwu nke 6: Ebe Argentine:
N'ihe dị ka Ọktoba 2016, John mere ka ndị na-eso ụzọ Instagram mara ya ọhụụ banyere oge ọhụụ na-egosi maka ndị ntorobịa Argentina. O mere ka ọtụtụ ndị na-eso ụzọ ya, gụnyere anyị ụjọ - na-eche ma ọ bụrụ na nne na nna John McGinn nwere mmekọrịta ezinụlọ na mba ndịda South America. Mgbe anyị nyochachara nke ọma, anyị ahụghị njikọ nna ochie.
N'oge ụfọdụ na akụkọ ndụ ya, McGinn agaraghị edekọ ihe ndị ka ukwuu ma ọ bụrụ na ọ bụghị maka nkwado nke ezinụlọ ya, ọkachasị Stephen (papa ya). N'ihi ndị mụrụ ya, injin akara ngosi dị ugbu a na ndepụta BBC dịka n'etiti ndị isi egwuregwu iri nke Premier League.
Akụkọ ndụ nke John McGinn na-enyere anyị aka ịghọta eziokwu ahụ na ọ bụrụ na ị setịpụrụ ezi ihe nlereanya, ọ dịghị mkpa ichegbu onwe gị banyere ịtọ ọtụtụ iwu. Ndị òtù ezinụlọ ya - ndị na-agba bọl n'ihu ya dị ka Jack, Stephen, na Paul gosipụtara nke ahụ.
Obi abụọ adịghị ya, ụmụnne ya etinyewokwa aka na ịrị elu ya na bọlbụ. N'agbanyeghị ụdị ọkpụkpọ ya dị iche iche Jack Grealish, ọtụtụ Fans rụrụ ụka na eziokwu ahụ duo nwere ahụmịhe dị iche na ọrụ mba ụwa.
Daalụ maka ịgụ John McGinn's Bio. Cheta, anyị na-agbasi mbọ ike ịnye gị akụkọ gbasara akụkọ nwata nke ndị egwuregwu bọọlụ gị kacha asọpụrụ. Jiri nwayọ kpọtụrụ anyị ma ọ bụrụ na ịchọta ihe ọ bụla na-adịghị ka ọ dị mma na edemede anyị. Ma ọ bụghị, gwa anyị ihe ị chere gbasara ndị egwuregwu bọọlụ Scottish na ngalaba nkọwa.
Maka ozi ngwa ngwa banyere John McGinn, jiri tebụl Wiki anyị nke na-achikota Biography.
Aha n'uju: John McGinn
aha otutu: Anụ bọọlụ
Age: Afọ 27 na ọnwa 1
Ebe amụrụ onye: Glasgow, Scotland
Nna: Stephen McGinn
Nne: Mary McGinn
Ụmụnne: Stephen na Paul McGinn (ụmụnna nwoke ndị okenye)
Katie McGinn (nwanne ejima)
Enyi / Nwunye: Sarah Nwachukwu
Rygwọ ọnwa kwa afọ: £ 1.3 nde
Ezigbo Net: 7.6 Nde
elu: 1.78 m (5 ft 10 na)